सबै भन्दा अचम्मलाग्दो र सुन्दर युरोपेली महल इम्प्लेसहरूमध्ये प्लास्ट्रोबर्गबाट टाढा नपुगेको छ र पेट्रोफको रूपमा चिनिन्छ। इतिहासले यो अद्भुत स्थानको निर्माणलाई छोटो वर्णन गर्दछ। चल्ने प्रयास गरौं र हामी चाँडै पेट्रोफको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरणमा हिड्यौं।
किंवदंती भन्छन् कि यस शहर को लागि स्थान पीटर I द्वारा चुनेको थियो। 1705 मा एक सानो जहाज "Munker" सेंट स्ट्रीटबर्ग देखि निर्माण फिनल्याण्ड 40 किलोमीटर को किनारा मा एक सानो जहाज मा उतरा। यहाँ देखि, बाल्टिक सागर र विशाल द्वीप को क्षितिज राम्रो तरिकाले देख्यो, जहाँ उस समयमा खेतीयोग्य किले Kronshlot को निर्माण आयोजित गरियो। 1708 मा, पीटर महान को काठ को महल को पहिलो उल्लेख पोकोस्कोयाया म्यानार मा बनाइयो, जसको ज्योति को रूप मा "खोरोम्टी" भनिन्छ। यसैले Peterhof को इतिहास शुरू गर्यो।
मुख्य निवासको परियोजना
1710 मा, चकर्मिश मान्छेलाई पेट्रोफोको शानदार महल इङ्गल्याण्डमा बदल्न पहिलो कदम लागियो। कथा भन्छ कि स्वीडेनमाथि विजय पछि, पत्रुसले मैले फ्रान्सको यात्रा गरे। त्यहाँ तिनले शानदार फ्रांसीसी शाही निवासहरू - Choisy, Trianon, Versailles को लेआउट अध्ययन गरे। एकै समयमा, विभिन्न प्राविधिक समाधानहरू र पार्क र फव्वारेको व्यवस्थाको विवरणमा विशेष ध्यान दिइएको थियो।
1716 मा, राजाले फ्रान्सबाट आदेश दिएका प्रसिद्ध आर्किटेक्ट अलेक्जेन्डर लेबोलोन, उनलाई भविष्यको पेट्रोफको सामान्य आर्किटेक्ट नियुक्त गरे। धेरै विचारहरू इटालियन आर्किटेक्टहरूद्वारा पत्ता लगाइयो - बार्टोलोमोलो कार्लो रस्तत्री, निकोलो मीकाटी, फव्वारेहरूका स्वामी - वेनिसियन गिलिओयोनो र गियोनोनी बरट्टिनी।
Peterhof को निर्माण मा काम उत्कृष्ट गति संग आयोजित भएको थियो, र पहिले देखि देखि अगस्त 1725 को यो महत्वपूर्ण उद्घाटन भयो। यस समयमा, धेरै फव्वारेहरू सञ्चालन गर्दै थिए, सागर नहर खोलियो र पार्कलाई योजना बनाइयो, र साना महलहरू - माली र मोन्प्पाइसर पनि बनाइएको थियो।
Peterhof को पहिलो लेआउट बनाउन सम्मान को लागी एमजी Zemtsov - एक प्रसिद्ध रूसी वास्तुकार गिर गयो। त्यस अघि, त्यहाँ किसानहरूको लागि जटिल क्षेत्र को क्षेत्र मा कुनै पनि परिसर थिएन जसको निर्माण भयो। एक स्पष्ट लेआउटको लागि धन्यवाद, Peterhof दुई अतिरिक्त इमारतहरू प्राप्त - राज्य किसानहरूका लागि , मास्टर कोर्प्स अदालतको लागि निर्मित - कोभलर।
1725 मा गठन गरिएको अनुदान कारखाना, पहिलो औद्योगिक सुविधा हो कि पेट्रोर्भ प्राप्त भयो। यसको घटनाको इतिहास यो वास्तुशिल्प कृतिको निर्माणसँग नजिक छ। कारखाना को मुख्य कार्य पत्थर को प्रसंस्करण थियो, जो भविष्य को शहर को महलहरु र वास्तुकला ढांचे को निर्माण गर्न प्रयोग भएको थियो। त्यस समयमा, काम पहिले देखि नै एक पानी कणु को निर्माण मा शुरू भएको थियो, जो Peterhof को फव्वारेहरु लाई खिलाडिने थियो। यो शक्तिशाली हाइड्रोलिक संरचनाको इतिहास रोपा नदीको छेउमा सुरू भयो। यो उनको पानी थियो जो Peterhof नाम पार्क पार्क को सबै फव्वारे प्रदान गर्न को लागी थियो।
शताब्दी XVII-XVIII मा महलको इतिहास।
Peterhof मा क्याथरीन I र अन्ना आइओनोवना को शासन को समयमा, पीटर को विचारहरु र आर्किटेक्चरल सुधार को अभ्यास मा राखयो .जब एलिजाबेथ पेत्रोवना सिंहासनमा आउँछ, उनको प्रसिद्ध कार्लो रस्तरेली को छोरा को आमंत्रित गरे, जो कि पहिले देखि नै आफैले एक शानदार वास्तुकार को रूप मा स्थापित गरे। फ्रान्सेस्को रास्ट्रेलीले पेट्रोफको पुनर्गठनमा काम गरे। यसको साथमा, माथिल्लो कक्षहरू बदलिन्छन्, ऊपरी बगैंचा सजाइयो। साथै, एक नयाँ एलिजाबेथ कोर को निर्माण गरिएको थियो, जसले पहिले देखि नै सुसज्जित पहिले देखि सुसज्जित सुसज्जित Peterhof दर्ज गर्यो।
क्याथरीन II को शासन को समयमा कुनै पनि कार्डिनल बदलाव को बारे मा इतिहास चुप छ। यस अवधिको दौरान सबै परिवर्तनहरू महलहरूको आन्तरिक सजावट र क्यालिस्टिनमा एलिजाबेथ कोरको नाम परिवर्तन गर्न परिवर्तन भयो।
पल म सिंहासन को शिकार को समयमा, Peterhof को वास्तुकला संरचनाहरु लाई तत्काल आवश्यक मरम्मत को, र cascades फव्वारे व्यावहारिक रूप देखि काम गरेन। यसले सम्पूर्ण महल परिसरको ठूलो पुनर्निर्माणको वर्ष लिन्छ। काम को मात्रा धेरै राम्रो थियो कि Peterhof को अंतिम पुनर्स्थापना पहिले नै XIX शताब्दी को शुरुवात मा थियो, जब पॉल आई - अलेक्जेंडर आई।
XIX सदीमा Peterhof
Peterhof गाँउ मा शताब्दी को शुरुवात मा वहाँ निवासियों को पचास घरहरु र विभिन्न गैर आवासीय भवनहरु - सामान, शेड र यति थिए। अलेक्जेंडर मैले सबैभन्दा बदसूरत भवनहरू पुनर्निर्माण गर्न आदेश दिए। वीपी स्टेस्भोभ र अरूले नयाँ घरहरूको लागि परियोजनाहरू विकास गरेका थिए। परिवर्तित भवनहरूले धेरै घुमाउने रेजिमेन्टहरूको लागि बैराकको रूपमा सेवा गरे।
निकोलस अन्तर्गत मैले पेट्रोफको क्षेत्रलाई लोअर पार्कको पूर्वी भूमि खरिद गरी विस्तार गरिएको थियो। 1826 देखि, Peterhof को भवन दुई-कथा कटेज द्वारा पूरक हो, जो निकोलस I-Alexandria Feodorovna को पत्नी हो। पछि, किसानको महल बनाइयो र ल्याण्डस्केप पार्क सम्पन्न भयो।
अलेक्जेंडर द्वितीय को पहुँच रेल को उद्घाटन द्वारा चिह्नित गरिएको थियो, जो सेन्ट पीटर्सबर्ग र पेट्रोर्फ संग जोडिएको थियो। 1917 सम्म महल परिसरको इतिहास शानदार महिलाहरु र सज्जनहरुको शाही जीवन हो, शाही परिवारका सदस्यहरु र पोर्चुगल महानगरहरु।
XX सदीमा Peterhof
क्रांति पछि, सम्पूर्ण महल र पार्क इमेज राष्ट्रीकरण गरिएको थियो। 1918 मा, यसको शानदार हॉलबाट, कामदारहरूको पहिलो भ्रमण सम्पन्न भएको थियो। तर विनाशकारी इम्बुलको पूर्ण पुनरावृत्तिले लगभग 10 वर्षको अवधि लियो। 1926 सम्म कम पार्क को फव्वारे पुनर्निर्माण गरियो, र 1930 सम्म फाउन्टिन पाइपलाइनहरु लाई प्रतिस्थापित गरियो र ओभरग्राउड ऊपरी गार्डन बहाल भयो।
ठूलो देशान्तर युद्धले Peterhof छोड्न सकेन। धेरै भन्दा बढी प्रदर्शनहरू चोरी वा चोरी भएका थिए, र वास्तुकला ढाँचाहरू मलबेको ढोकामा परिणत भयो। Peterhof को 1944 मा मुक्ति पछि तुरुन्तै मरम्मत र पुनरुत्थान कार्य शुरू भयो जुन 30 वर्ष सम्म भयो। केवल 1973 मा महल र पार्क परिसर यसको मूल रूपमा फर्काइयो, र त्यस पछि देखि पेट्रोफ रसिया र विदेशी पर्यटक दुवैको हृदय विजयी भएन।
मिसाइल विनाशकारीहरू: TOP-10। अन्तरिक्ष अन्वेषणको इतिहासमा मिसाइलहरूको सबैभन्दा असफल प्रक्षेपण
यूएसएसआर को विदेश मामलों को मंत्रीहरु। यूएसएसआर को विदेश मंत्री को पहिलो मंत्री
पुरानो रूसी मान्छे: परिभाषा, गठन र ऐतिहासिक महत्व
कस्ता सहस्राब्दी कृषिमा देखा पर्यो? देशको कुन क्षेत्रहरू खेती सुरु गर्ने पहिलो थिए?
पद र गद्य मा वर्षा बारेमा रोचक पहेली
उत्तर एशिया के हो? यो रूस छ!
MDF: यो के हो? बुझ्न प्रयास
मीठो मरिच। साइबेरिया लागि सबै भन्दा राम्रो प्रजातिहरू
पर्यावरण व्यवस्था के छ
एक्लै सही आँखा मेकअप गर्दै